Banyere Anyị - Shandong Lechuang Machinery Equipment Co., Ltd.
Onye nrụpụta ọkachamara nke akụrụngwa njikọ ọkpọ ọkpọ thermoplastic
Companylọ ọrụ akụrụngwa ịgbado ọkụ Lechuang bụ otu n'ime ndị nrụpụta ọkachamara mbụ na China na -amụ, mepụta ma mepụta akụrụngwa maka njikọ ọkpọ ọkpọ. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe, ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara ugbu a gụnyere igwe igwe ịgbado ọkụ butt-fusion igwe, igwe ịgbado ọkụ butt maka igwe ọkpọkọ, igwe ịgbado ọkụ nwere ụdị akwa na ngwa ịcha ọkpọ plastik maka ọkpọkọ 1600mm na n'okpuru, yana ngwa enyemaka dị iche iche ejiri rụọ ọrụ nke ukwuu nke usoro na ụdị dị iche iche.
Igwe ịgbado ọkụ nke ejiri mee ihe na PE na PP nke na -ewepụta pipeline, ụlọ ọrụ pipeline, ụlọ ọrụ gas, ụlọ ọrụ mmiri, ngalaba ihe owuwu, njem kemịkalụ na idobe eriri. Kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ butt nke PE, HDPE, PPR, ọkpọkọ thermoplastic PVDF.
Anyị bụ ndị na-emepụta igwe ịgbado ọkụ butt, yabụ ụlọ ọrụ nwere ike iru ihe ndị ọrụ dị iche iche chọrọ iji chepụta, rụpụta, akpaka, akwụkwọ ntuziaka, hydraulic na ọkọlọtọ ya, igwe ịgbado ọkụ na-abụghị ọkọlọtọ, wee kwe nkwa akwụkwọ ikike n'efu otu afọ na ọrụ mmezi ndụ.